ပြတိုက်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြည်တွင်းမှ ပြတိုက်များ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြ? - Yangon Media Group
ပြတိုက်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြည်တွင်းမှ ပြတိုက်များ အချင်းချင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာပြတိုက်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်းများပြုလုပ်ရန် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက ‘အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနေ့’ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို မေ ၁၈ ရက် အမျိုးသားပြတိုက်(ရန်ကုန်) တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်သော ‘ခေတ်သစ်လူထုဆက်သွယ် ရေးပြတိုက်အချင်းချင်း ဆက်သွယ် ပေး’ဆိုသည်နှင့်အညီ ပြတိုက်များ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဒီနေ့ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ ပြတိုက်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ICOM နှစ်စဉ် မေ၁၈ရက်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့အပြင် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြတိုက်တွေအတွက် ဆောင်ပုဒ်တစ်မျိုးစီ သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် နဲ့ ‘ခေတ်သစ်လူထုဆက်သွယ်ရေး ပြတိုက်အချင်းချင်း၊ ဆက်သွယ်ပေး’လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
Hyper connected (မြင့်မားတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေ)ဆိုတာဟာ လူချင်းတွေ့ဆုံ၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Email နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Massage နဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အင်တာနက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာပြတိုက်များနဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ ပြတိုက်များနဲ့ အခြားသော ဝန်ကြီးဌာနများမှာရှိတဲ့ပြတိုက်များ၊ ပုဂ္ဂလိကပြတိုက်များဟာ ပြတိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အတူတကွ လက်တွဲအတူဆောင်ရွက် ကြဖို့အတွက် အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်”ဟု ၎င်းကအခမ်းအနားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
ပြတိုက်ဆိုသည်မှာ အမြတ်အစွန်းကို အဓိကမထားဘဲ ပြည်သူများကို ပညာများဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ၏နားလည်မှုနှင့် သင်ယူမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးရမည်ဟုဆိုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များ နေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များကောင်စီ ICOM မှ မေ ၁၈ ရက်တွင်ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထား ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပ သည့်အခမ်းအနားသည် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်အခမ်းအနားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြတိုက်များကောင်စီ ICOM ရဲ့ (၄၁)နှစ် မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုများ အလွန်တိုးတက်ထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှ လူသားတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်ထွန်းကားရေးအတွက် ပြတိုက်တွေဟာ အလွန်အရေးပါလာတဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာ တွေကနေ ပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံ လင်းက အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။ ရှေ့ဆက်၍ ပြတိုက်များကို လူအများ လာရောက်ကြည့်ရှုအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် လူအများရှိရာသို့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သည့် Mobile Museum များ ခေတ် စားလာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကွန်တီနှင့် မိမိကြားက စကားစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဟု မော်ရင်ဟို ထုတ်ဖော်ပြောကြား၊ အေဂျက်၏ စာ??